Ulwazi ngobume bezithuthi ngoku luyafumaneka kuMbindi Mpuma | Ndisuka mac
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, sikwazise ngezicwangciso zika-Apple zokwandisa inani lezixeko apho zinokubonelela ngenkonzo yolwazi kwizithuthi zikawonke-wonke, ke olu lwazi luzakufumaneka kungekudala eMadrid, eParis naseRoma, phakathi kwezinye. Kodwa umsebenzi uqhubeka u-Apple ukuwenza kwinkonzo yeeMephu awupheleli apha, kuba ngokwewebhusayithi ka-Apple, inkonzo yolwazi lwezithuthi ngoku iyafumaneka eSaudi Arabia nakwi-United Arab Emirates, Ulwazi olufika kwiminyaka eliqela emva kokufumaneka kwiimephu zikaGoogle.
Okwangoku olu lwazi lufumaneka kuphela kumaziko esixeko e-Dubai, Riyadh, Abu Dhabi, Buraydah, Medina, Mecca, Ta'if phakathi kwabanye. Olu lwazi kukwandiswa okukhulu kwenkonzo ye-Apple Maps eMbindi Mpuma ukongeza amanqaku onomdla. Ndiyabulela kulo msebenzi mtsha, abaqhubi abasebenzisa isixhobo seApple Bazokwazi ngamaxesha onke imeko yezithuthi kwaye bafumane izilumkiso ngexesha lokwenyani yeendlela ezivaliweyo zemisebenzi. Okwangoku umsebenzi wokuhamba awufumaneki nakweliphi kula mazwe.
Ukusukela oko uApple wasusa iimephu zikaGoogle kwinkqubo yokusebenza yeedivayisi eziphathwayo ze-iOS kwaye wasungula eyayo inkonzo ye-Apple Maps, inkampani esekwe eCupertino iye yahamba kancinci ukongeza iinkonzo ezintsha kunye nokuphucula ukusebenza kwesicelo. Zombini iinkcukacha zendlela kunye nolwazi olunxulumene nezithuthi zikawonke-wonke zathiwa thaca ngokusesikweni ngo-2015 ngokusungulwa kwe-iOS 9. Ikwasinika nomsebenzi osivumela ukuba sityelele izixeko ngakwiliso lentaka, indlela efanelekileyo yokucwangcisa uhambo lwethu oluzayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ulwazi lwendlela ngoku luyafumaneka kuMbindi Mpuma